BAVOKO SEO Tools Review Plugin WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/BAVOKO SEO Tools WordPress Plugin Review
Mid ka mid ah su'aalaha ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca marka dib loo eegayo plugin SEO cusub waa suurtagal. Ma run ahaantii waxaan weli u baahan plugin SEO kale ee suuqa WordPress? Aan ogaano.
Kahor intaanan bilaabin, fadlan ogow in ujeedada dib u eegistani aysan ahayn in lagu qanciyo in pluginkani uu ka fiican yahay xalalka si fiican loo aasaasay ee suuqa. Waxaan dhowr maalmood ku qaatay barashada plugin's USPs. Waxa aan helay ayaa laga yaabaa in ay adiga uun ku xiiso geliyaan.
Waxay hoos ugu dhacdaa tan - BAVOKO SEO Tools plugin WordPress wuxuu diiradda saarayaa hagaajinta socodka shaqadaada SEO. Hubi, pluginkani waxa uu leeyahay dhammaan sifooyinka ay bixiyaan hormoodka SEO plugins. Intaa waxaa dheer, sifooyinkan si fiican ayaa loo habeeyey si ay u noqdaan kuwo badan dareen leh oo dhaqso badan in la isticmaalo. Plugin-ku wuxuu ku siinayaa a aragti dhexe dhamaan SEO-gaaga xogta, laga soo ururiyay dashboards badan. Kuwaas waxaa ka mid ah darajada ereyga muhiimka ah, mugga raadinta, CPC iyo guji xogta Google Search Console; gaadiidka Google Analytics iyo xogta backlink ee BAVOKO API.
Qalabka BAVOKO SEO plugin WordPress waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo nuxurka iyo kooxaha SEO habeeyaan shaqadooda. Dhawr gujin oo keliya, pluginku wuxuu samayn karaa isbeddello badan oo ku saabsan sharraxaadda SEO ee dhammaan qoraallada iyo boggaga boggaaga. Natiijo ahaan, haddii goobtaada ay leedahay waxyaabo badan oo ka kooban markaa plugin-kan ayaa ku caawin doona waqti badan badbaadi.
Wakaaladaha SEO, Dhegayso!
Inta badan hay'adaha SEO waxay arkaan goobo badan oo macaamiisha ah oo leh khaladaad SEO ah oo aasaasi ah. Waxaa laga yaabaa inay haystaan ​​waxyaabo badan oo wanaagsan, laakiin dhammaantood lagama yaabo in lagu hagaajiyo ereyada muhiimka ah ee saxda ah. Qaar baa laga yaabaa inaan si habboon loogu xidhin nuxurka jira. In yar ayaa laga yaabaa inay hagaajiyeen sharraxaaddooda wadaagga warbaahinta bulshada.
Shakhsi ahaan, arrimahan ayaa laga yaabaa inaysan u muuqan kuwo aad muhiim u ah. Isku dhafka iyaga oo isku daraya si ay u sameeyaan laf dhabarta istaraatiijiyadaada SEO.
Haddii aad tahay hay'ad SEO ah, BAVOKO SEO Tools plugin waxay saacado ka badbaadin kartaa mashaariicda macmiilka iyo si weyn u wanaajiso waqtiga soo celinta.
Hagaha dib u eegista
Kooxda BAVOKO waxay leeyihiin a casharro faahfaahsan dhammaan sifooyinka ay bixiso BAVOKO SEO Tools plugin. Maaddaama plugin-kan si firfircoon loo horumariyo, waxaan kugula talin lahaa inaad siiso akhri - ka dib markaad akhrido dib u eegistan.
Hadafkayga dib u eegistani waa inaan ku siiyo dulmar ku saabsan dhammaan sifooyinka Plugin BAVOKO SEO ay bixiso. Dhawr ka mid ah sawirada shaashadda ayaa laga soo qaaday demo dashboard-kooda maadaama aan doonayay inaan ilaaliyo gaar ahaanshaha cabbirrada goobidda/taraafikada goobtayda. Sidoo kale, goobta demo ee WordPress kuma shaqaynayso halkan, maadaama xogta demo aan lagu tilmaamin matoorada raadinta.
Waxaan tijaabiyay nooca bilaashka ah iyo nooca premium ee plugin ee dib u eegistan. Si kastaba ha noqotee, inta dib u eegista lagu sameeyay, waxaan si cad u sheegay haddii astaantu ay tahay mid qaali ah. Habkaas waxaad u qaadan kartaa in haddii aan la sheegin, astaamaha lagu heli karo nooca bilaashka ah ee plugin.
Ku Bilaabashada BAVOKO SEO Tools Plugin WordPress
Nooca bilaashka ah ee BAVOKO SEO Tools plugin waxaa si toos ah loogu rakibi karaa dashboardka WordPress. U gudub Plugins > Kudar Cusub. Ka raadi BAVOKO oo ku shub oo dami plugin
Haddii aad iibsatay nooca premium ee plugin, waxaad heli doontaa kaydka ZIP ee plugin. U gudub Dashboardka WordPress> Plugins> Kudar Cusub> Soo rarid. Soo rar kaydka si aad u rakibto oo aad u dhaqaajiso plugin
Markaad rakibto plugin, waxaad ku bilaabi kartaa habka dejinta.
Habka dejinta nooca premium ee BAVOKO SEO Tools
Si wax loo bilaabo, waxaan u baahanahay inaan ku xidhno BAVOKO API, Google Search Console API iyo Google Analytics API plugin. Tani waxay awood u siin doontaa plugin-ku inuu akhriyo xogta SEO ee qalabyada kala duwan oo uu ku muujiyo dashboard dhexe. Si kastaba ha ahaatee, nooca bilaashka ah ee plugin, waxaad ku xidhi kartaa oo keliya Google Search Console API.
Intaa waxaa dheer, haddii aad leedahay plugin SEO hore oo lagu rakibay, BAVOKO waxay ka soo dejisan kartaa xogta SEO plugin.
Tallaabada ugu dambeysa, waxaad u baahan tahay inaad doorato boostada iyo boggaga aad rabto in lagu eego bogga SEO. Halkan waxaa ah sawir-qaadista habka dejinta ee nooca bilaashka ah ee plugin.
Habka dejinta ee nooca bilaashka ah ee BAVOKO SEO plugin
Falanqaynta SEO oo faahfaahsan
The BAVOKO SEO Tools Dashboard (nooca qaaliga ah)
Kadib habraaca habaynta bilowga ah, pluginku waxa uu baadhayaa waxa ku jira oo ka soo jiidaya xogta Google Search Console, Google Analytics iyo BAVOKO API. Natiijadu waa dashboard ku siinaya dulmar indhaha shimbiraha ee goobtaada WordPress ee SEO.
Waxaad shaandheyn kartaa dashboard-ka si ay kuugu tusto cabbirka guud ee raadinta, bogga SEO, dib-u-xireyaasha ama waxqabadka - muddo go'an. Nooca bilaashka ah ee plugin wuxuu ku xaddidan yahay raadinta iyo cabbirada bogga. Dib-u-xireyaasha iyo waxqabadka waxa loo xafiday nooca premium ee plugin.
Kobcinta Mawduuca SEO
Sida aan wada ognahay, nuxurka wanaagsan ayaa ah tiirka SEO. Si kastaba ha ahaatee, marka aad haysatid waxyaabo badan oo aad ku maamusho, arrimuhu waxay u muuqdaan inay qasan yihiin. Tani waa meesha BAVOKO SEO plugin uu bilaabo inuu iftiimiyo. Waxay bixisaa liis balaadhan oo ah xulashooyinka hagaajinta nuxurka ee boostada iyo bog kasta. Intaa waxaa dheer, waxaad wax ka beddeli kartaa qaybahan hagaajinta si aad waqtiga u badbaadiso (wax badan oo tan dambe ah).
Ikhtiyaarada Hagaajinta Mawduuca
Qalabka BAVOKO SEO wuxuu ku meeleeyaa a dhibcaha nuxurka (oo loo yaqaan CS) qoraal kasta iyo bog kasta oo ku saleysan macluumaadka SEO. Waxaa ka mid ah cabbirrada nuxurka sida H1-H6 tags, dhererka cinwaanka, sharraxa meta iyo qayb yar iyo cufnaanta ereyga muhiimka ah.
Raadi Meta iyo Qaybaha Warbaahinta Bulshada
Raadinta iyo Qaybaha Baraha Bulshada
Marka laga reebo cinwaannada meta iyo sharraxaadda makiinadaha raadinta, waxaad dejin kartaa ciwaanka goos gooska, sharraxaadda iyo sawirka Facebook iyo Twitter. Si la mid ah inta badan plugins-yada SEO, waxay asal ahaan adeegsataa metadata Graph Open iyo Kaararka Twitter-ka, taas oo awood u siinaysa helitaanka aan kala go 'lahayn ee dhammaan shabakadaha warbaahinta bulshada ee muhiimka ah. Aragtida gogoldhigga ayaa ku tusinaysa sida saxda ah ee boostadaadu u ekaan doonto marka lagu wadaago warbaahinta bulshada.
Falanqaynta Qiimaynta Erayga Muhiimka ah & Helitaanka
Falanqaynta Erayga Muhiimka ah iyo Sooyaalka Qiimaynta
Wanaajinta nuxurku waxa kale oo uu bixiyaa falanqaynta ereyada muhiimka ah ee boostada ama bogga gaarka ah. Waxay ku siinaysaa darajaynta erayga muhiimka ah ee hadda iyo taariikhda darajada - oo ay ku jiraan dhagsi, CTR, booska iyo aragtiyaha. Xogtan waxa laga soo saaray Google Search Console Intaa waxaa dheer, waxaad si toos ah uga samayn kartaa cilmi-baarista ereyga muhiimka ah widget-kan oo waxaad ogaan kartaa ereyo muhiim ah oo cusub oo ay ku jiraan ereyo muhiim ah oo la mid ah.
Xogta Xiriirinta Gudaha (sifada qaaliga ah)
Qodobka ugu weyn ee waxqabadkaaga SEO waa isku xirka gudaha. The BAVOKO SEO Tools plugin group dhamaan xiriiriyeyaasha gudaha ee ku saleysan ereyada muhiimka ah waxayna soo jeedinayaan xiriiriyo gudaha cusub oo ku saleysan macluumaadkaaga. Waxa kale oo ay ku tusinaysaa liiskaaga taariikhiga ah ee dhammaan xidhiidhayaasha soo galaya iyo kuwa baxaya (gudaha goobtaada) ee boostada/boggaas.
Xulashada SEO horumarsan
Marka laga reebo godadka warbaahinta bulshada, waxaad bedeli kartaa fursadaha horumarsan sida summada canonical, jiheynta ama ku darida khariidadda goobta.
Kormeerka Waxqabadka SEO
Xogta Qiimaynta Erayga Keydka ee Google Search Console
Hagaajinta nuxurka waa qayb weyn oo ka mid ah istaraatiijiyada SEO ee guuleysta. La socoshada saamaynta dadaalkaaga SEO si siman ayay muhiim u tahay. Plugin BAVOKO SEO WordPress wuxuu leeyahay qalab awood kuu siinaya inaad si toos ah ula socoto waxqabadkaaga SEO, si toos ah uga socda dashboardkaaga WordPress. Sawirka kore, waxaan ku helnaa dulmar xogta ereyga muhiimka ah ee laga soo saaray Google Search Console.
Korjoogteynta ereyga muhiimka ah
Isticmaalka Korjoogteynta ereyga muhiimka ah sifada, waxaan awoodnaa inaan kooxeyno ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan si aan ula socono dhagsi, aragtiyo, CTR iyo celceliska booskooda mashiinka raadinta hal dulmar.
Cilmi-baarista ereyga muhiimka ah iyo falanqaynta tartanka
Nooca pro ee plugin-ka, waxaad samayn kartaa waxyaabo dheeraad ah sida la socoshada tartamayaashaada, samee cilmi baarista ereyga muhiimka ah oo aad jebiso taraafikada raadinta dalka iyo aaladaha.
Si kastaba ha ahaatee fikradayda, iyada oo tani ay tahay 'wanaagsan in la haysto', kuma siinayo dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u sameyso istiraatiijiyad cilmi-baaris ereyga muhiimka ah oo guuleysta. Aaladaha ay ka midka yihiin Ahrefs ama Majestic SEO waxay ku siinayaan macluumaad qani ah oo kugu saabsan qiimeynta ereyada muhiimka ah iyo sida loo horumariyo.
Sidaan horay u soo aragnay, BAVOKO SEO Tools waxay soo bandhigtaa macluumaadka laga helay ilo xogo kala duwan sida Google Analytics ama Console Search Google. Si kastaba ha noqotee, midna waa inuusan wiiqin muhiimada cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ee wanaagsan, iyo ku dhaqangelinta waxyaabaha ku jira boggaaga.
On-Bogga Tilmaamaha Horumarinta SEO
Tani waa mid ka mid ah qaybaha aan ugu jecelahay BAVOKO SEO Tools. Waxaad ka heli kartaa warbixinta "caafimaadka SEO" ee dhammaan waxyaabaha ku jira boggaaga hal dashboard. Tan waxaa ku jira cinwaannada meta, sharraxaadaha meta, cinwaannada iyo dhererka nuxurka, iyo kuwo kale. Kadib waxaad dooran kartaa qoraal kasta oo aad mid mid u hagaajin kartaa isla aragtida.
dulmar ku saabsan ereyada muhiimka ah ee mudnaanta leh iyo qaybo bulsheed Waxaad ka saari kartaa qoraalada si liidata loo hagaajiyay si aad ugu wanaajiso iyaga si ay u helaan darajo goobeed oo wanaagsan.
Warbixinta Ereyada Muhiimka ah ee mudnaanta leh
Tusaale ahaan, warbixinta ereyada muhiimka ah ee SEO kaliya kuma siinayso dulmar ereyada muhiimka ah ee laguu qoondeeyay, laakiin sidoo kale waxay awood kuu siinaysaa inaad ogaato boggaga ay ka maqan yihiin.
Nooca premium ee pluginku wuxuu ku siinayaa hubin caafimaad oo dheeri ah sida canonicals, indexability and status codes. Qalabka indexability-gu wuxuu taxayaa qoraallada la tilmaami karo ama aan la tilmaami karin Google. Waxaad isticmaali kartaa qalabka canonical si aad u hubiso in boggaaga WordPress aan lagu ciqaabin waxyaabaha nuqul ka mid ah adiga oo dejinaya bogag isku mid ah ama aad isku mid ah.
Aaladda Dabagalka, Dabagalka iyo Diidmada Backlink
Dhisidda iyo ilaalinta dib-u-celintaada waxay fure u tahay istaraatiijiyada SEO ee muddada-dheer ee guuleysta. Dhismaha backlinks, haddii kale loo yaqaan dhismaha isku xidhka waa mawduuc gebi ahaanba ka duwan kaas oo aynaan halkan kaga hadli doonin. Taa beddelkeeda, waxaan diiradda saari doonnaa dhinaca dayactirka.
Nooca qaaliga ah ee BAVOKO SEO Tools plugin waxay la socotaa la socodka dhabarka, falanqaynta iyo qalabka diidmada. Aan ku baadhno taas halkan.
Hal-guji Qalabka Disaww
Bilawga, aad bay muhiim u tahay diido dib-u-celinta tayada liidata goobtaada. Iyada oo la adeegsanayo qalabka diidmada plugin, waxaad ka saartaa domain kasta adigoo hal gujin ah. Dhammaan xiriiriyeyaasha dambe ee bogga la diiday waxaa loola dhaqmi doonaa sidii xiriiriyeyaasha NoFollow ka dib marka loo gudbiyo Google Search Console.
Dib-u-xidhidaynta Domain Analysis and Monitoring (qaabka qaaliga ah)
Qalabka BAVOKO SEO wuxuu la socdaa falanqaynta dhabarka iyo la socodka qalabka kaa caawinaya inaad si toos ah uga xakamayso dib-u-celintaada dashboardkaaga WordPress. Waxaad falanqeyn kartaa dib-u-xireyaasha ay kooxuhu u qaybsan yihiin bogag ama bogag gaar ah.
Aaladaha kale ee SEO ee BAVOKO
Tilmaamaha Meta Dhaqdhaqaaqa
Marka laga reebo sifooyinka kor ku xusan, BAVOKO SEO Tools waxay leedahay sacab muggiis oo ah qalab SEO ah oo faa'iido leh, taas oo badbaadisa waqti badan oo lagu qaato SEO. Waxaan si degdeg ah ugu dabooli doonaa kuwa soo socda:
Ciwaanka Meta Dhaqdhaqaaqa & Sharaxaadaha: Qalabkani wuxuu awood kuu siinayaa inaad beddesho cinwaannada meta iyo sharaxaadda dhammaan noocyada boostada (sida boostada iyo boggaga) adoo dooranaya sifooyinka aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa metas adiga oo isticmaalaya magaca boostada iyo qayb ka mid ah boostada. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa garoommada gaarka ah si aad u soo saarto cinwaannadaada meta iyo sharraxaadaha si dabacsanaan leh!
Tifaftiraha Guud ee Metas: Kani waa mid ka mid ah agabka wakhti-badbaadinta ugu badan ee ku jira xidhmada plugin-ka. Waxay awood kuu siinaysaa inaad si dhakhso leh u beddesho metasta dhammaan qoraaladaada, gacanta, adigoon furin kasta ku furin tab/daaqad cusub.
Maareeyaha Jihaynta: Qalabkani wuxuu awood kuu siinayaa inaad ku darto dib u habeynta SEO-saaxiibtinimo ee hal bog iyo hagayaal, si loo ilaaliyo casiirka SEO-ga.
Soosaaraha Khariidadda Goobta XML: Qalabkani wuxuu awood kuu siinayaa inaad abuurto khariidad goobeed u gaar ah boggaaga WordPress. Waxaad si fudud ugu dari kartaa bogag gaar ah, qaybaha tags iyo wax ka badan. Marka la keydiyo, waxay si toos ah u soo gudbisaa khariidadda goobta matoorada raadinta waaweyn, oo ay cusbooneysiisaa waqtiyo joogto ah.
.htaccess & robots.txt Tafatiraha: Markaad wax ka beddeli karto faylashan adoo isticmaalaya maareeyaha faylka ama FTP, pluginku wuxuu ku siinayaa marin toos ah iyaga. Si kastaba ha ahaatee, aad bay muhiim u tahay inaad ku beddesho goobahan taxaddar aad u daran, maadaama khalad kasta uu hoos u dhigi karo buundooyinka SEO-gaaga.
Nooca qaaliga ah ee BAVOKO SEO Tools plugin sidoo kale waxa ay la socotaa wanaajinta waxqabadka goobta iyo muujinta la socodka. Xawaaraha goobtu waa arrin aad muhiim ugu ah SEO, taasna waanu daboolnay qoto dheer in our Hagaajinta waxqabadka WordPress iyo Taxanaha hagaajinta sawirka WordPress. Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad akhrido si aad u fahanto.
Dulmar guud oo ah Tilmaamaha Premium BAVOKO
BAVOKO SEO Tools waxay la yimaadaan astaamo badan oo bilaash ah oo qaali ah. Kuwa soo socda ayaa ah astaamaha premium-kaliya uu bixiyo plugin:
Xog badan oo SEO ah: Bilawga, waxaad ku xidhi kartaa Google Analytics iyo BAVOKO API plugin. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad soo jiidato xog badan oo aad si toos ah ugu aragto dashboardka WordPress.
Cilmi-baadhis Kelmad: Aaladda daahfurka ereyga muhiimka ah, waxaad ku arki kartaa mugga raadinta iyo celceliska CPC ee ereyada muhiimka ah ee khuseeya. Si kastaba ha noqotee, waxaan aad ugula talin lahaa aaladaha horumarsan sida Ahrefs ama Majestic SEO ee cilmi-baarista qoto-dheer ee muhiimka ah.
Xiriirinta Gudaha: Tani waa sifada qaaliga ah ee wanaagsan oo kaa caawinaysa inaad wakhti badan ku badbaadiso isku xidhka maqaalada la xidhiidha.
Backlinks: Mar labaad, qalabyada sida Ahrefs ayaa ku siin kara xogta dib-u-celinta ka wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, hal-guji qalabka diidmada ayaa aad waxtar u leh in laga saaro tayada liidata ama dib-u-celinta spammy.
Indexability iyo Qalabka Canonical: Kuwani waa aaladaha bogga kuwaas oo ku siinaya warbixin xaaladeed oo ku saabsan sida waxa ku jira boggaagu uu uga soo horjeedo cabbirradan. Kuwani waxay ku fiican yihiin ilaalinta nadaafadda SEO.
Performance: Qalabka wax qabadku wuxuu ku siinayaa aragtida xawaaraha bogga ee dhammaan boggaga ku yaal goobtaada iyo sidoo kale xogta codsiyada faahfaahsan ee CSS, JS iyo faylalka sawirka.
Warbixinta SEO: Haddii aad tahay hay'ad SEO ah, qalabka soo saarista warbixinta ayaa si toos ah ugu diri kara warbixinnada SEO macaamiishaada iimaylka toddobaadlaha ama bilaha ah.
Sida aan wada ognahay, istaraatiijiyad SEO ah oo guuleysta waa ciyaar waqti dheer ah. Waxay u baahan tahay dulqaad badan iyo dayactir habaysan. Laakin adoo ka faa'iidaysanaya plugin SEO ah oo ku habboon baahiyahaaga waxaad badbaadin kartaa wakhti oo aad hubiso in goobtaadu ku sii socoto wadada.
Waxaan u maleynayaa in BAVOKO ay faa'iido badan leedahay marka ay tahay inaad maamusho waxyaabo badan. Nooca premium ee plugin muhiim maaha marka aad hadda bilaabayso. Halkaa marka ay marayso, waxa aad aad uga fiican tahay in aad dhisto waxyaabo tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, marka aad haysato kombuyuutar ka kooban waxyaabo wanaagsan, waxaad isticmaali kartaa plugin si aad ula socoto oo aad u ilaaliso caafimaadkaaga SEO ee bogga.
Si loo soo koobo, BAVOKO SEO Tools for WordPress waa plugin weyn oo loogu talagalay bloggers iyo hay'adaha SEO - gaar ahaan kuwa maamula waxyaabo badan iyo waxyaabo badan.
Waa maxay fikradahaaga ku saabsan Plugin BAVOKO SEO Tools? Ma haysaa soo jeedin muuqaal ah? Nala soo socodsii haddii faallooyinka hoose.
Dib u eegista WPForms: Foomka Xidhiidhka Premium Plugin ee ugu Fiican?
Sida loo Isticmaalo Apps fariimaha si loo kordhiyo isu socodka Boggaga WordPress